3 kosa ireo Malagasy mipetraka any ivelany efa namoy ny ainy, ka iray tany Frantsa ary roa tany Bélgique. 3 ireo mpila ravinahitra efa namoy ny ainy, ka iray tany Frantsa ary roa tany Bélgique. Miahy ireo Malagasy ny masoivoho tsirairay, ary manome vaovao sy mifandray amin’ny Minisiteran’ny raharaham-bahiny. Nifantoka tamin’ny fikarohana sy fiaraha-miasa iraisam-pirenena ny Minisiteran’ny raharaham-bahiny raha vantany vao tafiditra teto ny Covid-19. Isan’izany ny fanetsehana ny fiaraha-miasa tamin’ny mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola na ny PTF. Nahita fiaraha-miasa ho an’ny firenena roa tonta, toa an’i Chine, Korea Atsimo, Etazonia, Ethiopie, hoy ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny.